Dawladda Canada oo 45 Kaga Baaraan degaysa Dalabkii Ku Saabsanaa Aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Dawladda Canada oo 45 Kaga Baaraan degaysa Dalabkii Ku Saabsanaa Aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland
OTTOWA (Hubaal) – Dawladda dalka Canada ayaa la filayaa inay jawaab kaga soo bixiso codsi ay saxeexeen qurba-joog u dhashay Somaliland, isla markaana xildhibaan John McKay Jimcihii la soo dhaafay ka akhiyey Baarlamaanka dhexdiisa.
“Xildhibaan McKay wuxuu ka horjeediyey Baarlamaanka Canada dalab lagaga codsanayo dawladda Canada inay u aqoonsato Somaliland dal madax-banaan. Dalabku wuxuu ahaa mid buuxiyey shuruudihii lagaga dhex jeedin karayey baarlamaanka, waxaana saxeexay 295 taageere oo dhammaantood ka mid ahaa qurba-jooga Somaliland ee degan Canada,”ayuu yidhi Ryan Pyne oo ah xoghaynta gaarka ah ee xildhibaankan oo la hadlay wargeyska DAWAN oo wax ka weydiiyay hindisahaas. Mr. Pyne, waxa uu intaas ku daray in dalabyadda noocan oo kale ah ay dawladoodu kaga soo jawaabto muddo 45 gudahood, waxaanu xusay in jawaabta rasmiga ah dawladda Canada ka bixiso soo jeedinta aqoonsiga Somaliland lagu soo hagaajin doono xafiiska deegaan doorashadda xildhibaan McKay ee Scarborough-Guildwood.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibedda Dr. Sacad Cali Shire ayaa dhambaal mahad-celin ah u diray xildhibaan John McKay oo dhowaan u gudbiyey codsiga lagaga dalbanayo xukuumadda Canada inay Somaliland u aqoonsato dal madax-banaan.
Dr. Sacad, oo wargeyska Dawan soo gaadhsiiyey dhambaalka mahad-celinta isagoo ku sugan Ingiriiska oo uu xubin ka yahay weftga Madaxweyne Axmed Maxamed Siilanyo ee booqashada ku jooga dalkaas. Qoraalka Wasiirkuna waxa uu u qornaa sidan:-“Anigoo ka wakiil xukuumada iyo shacabka Somaliland, waxaan doonayaa inaan kaaga mahadceliyo u gudbinta dalabka aqoonsiga madaxbanaanida Somaliland baarlamaanka Canada. Somaliland way u qalantaa in loo aqoonsado dal madaxbanaan. Waxaay ugu leedahay xaq dhinac, hadday tahay sharciyan, taariikhiyan, ama bani’aadminimo. Waxaan kuugu soo lifaaqay “Caddeymaha sharci ee muujinaya sababta Somaliland ugu qalanto in la ictiraafo.”
Inkastoo aan la saadaalin Karin jawaabta xukuumadda Canada ka bixin doonto aqoonsi ay siiso Jamhuuriyadda Somaliland, waxa dhaqdhaqaaqyadani ay kaalin ka qaadan doonaan dedaalka Somaliland shacbi iyo dawladba ugu xusul duubayaan inay beesha caalamka ka helaan aqoonsi caalami ah oo ay kaga mid noqdaan dalalka adduunyadda.
Waxa kale oo arrintani wax ka bedalaysaa fahamkii dawladda Canada ee ku wajahan inay taariikhiyan u kala garto farqiga u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya.